XOG Muhiim Ah: Radamel Falcao,Clinton N’Jie Iyo Mario Balotelli Oo Muujiyay In Ay Ka Fiican Yihiin Xiddigah Premier League & Xog Ku Saabsan Xiddigaha Ugu Gool Dhalinta Fiican Daqiiqad Ahaan 5-ta Horyaal Ee Ugu Weyn Yurub – Kooxda.com
Home 2017 October Ingiriiska, Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino XOG Muhiim Ah: Radamel Falcao,Clinton N’Jie Iyo Mario Balotelli Oo Muujiyay In Ay Ka Fiican Yihiin Xiddigah Premier League & Xog Ku Saabsan Xiddigaha Ugu Gool Dhalinta Fiican Daqiiqad Ahaan 5-ta Horyaal Ee Ugu Weyn Yurub
XOG Muhiim Ah: Radamel Falcao,Clinton N’Jie Iyo Mario Balotelli Oo Muujiyay In Ay Ka Fiican Yihiin Xiddigah Premier League & Xog Ku Saabsan Xiddigaha Ugu Gool Dhalinta Fiican Daqiiqad Ahaan 5-ta Horyaal Ee Ugu Weyn Yurub
October 13, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Xiddigii ku fashilmay kooxaha Man United iyo chelsea ee Radamel Falcao ayaa ah xiddiga hogaaminaya horyaalada reer yurub xilli ay sidoo kale ku soo xigaan xiddigo kula fashilmay premier league.
Xiddiga reer Colombia ayaa dhaliyay 12 gool oo horyaalka Frnace xilli ciyaareedkan.
Xiddigan ayaa ah xiddiga ugu goolasha badan 5 horyaal ee ugu waaweyn qaarada yurub ee kubada cagta isaga oo ka fog wakhtigii uu ku qaatay Old Trafford iyo Stamford Bridge.
Goolashiisa ayaa cel-celis ahaan yimi hal gool 55-kii daqiiqaba isaga oo ah xiddiga ka badan xiddig kasta oo ka mid ah xiddigaha ugu goolasha badan horyaalada 5-ta ah ee ugu waaweyn xilli ciyaareedkan.
Xiddiga Juventus ayaa ku soo xiga isaga oo hal gool dhaliyay 56-kii daqiiqaba, Lionel Messi ayaa ku soo xiga isaga oo hal gool dhaliyay 57-kii daqiiqaba halka weeraryahanka Lazio ee Ciro Immobile uu dhaliyay hal gool 70-kii daqiiqaba.
Xiddigihii Falcao kula soo fashilmay Premier league ee Clinton N’Jie iyo Mario Balotelli ayaa dhankooda hal gool dhaliyay 76-kii daqiiqaba.
Waxana ay ka fiican yihiin xiddigaha ay ka midka yihiin Robert Lewandowski (76 daqiiqo) Iyo Neymar (90 daqiiqo).
Simone Zaza oo ah weeraryahan kale oo ku soo fashilmay Premier league ayaa gool dhaliyay 89-kii daqiiqaba isaga oo ka fiican Harry Kane oo isagu gool dhaliyay 104-tii daqiiqaba.
Xiddigihii Horay Uga Soo Ciyaaray Premier League
Goolka Daqiiqad kasta
Kane ayaan ahayn xiddiga ugu fiican dhanka gool dhalinta xilli ciyaareedkan isaga oo aan sidoo kale ahayn xiddiga England ah ee sidaa sameeya.
Xiddiga Kooxda Man city ee Raheem Sterling ayaa ka rikoor fiican marka loo eego xiddig ka soo jeeda England.
Xiddigan reer Man city ayaa 5 gool ku dhaliyay 387 daqiiqo oo uu ka ciyaaray xilli ciyaareedkan isaga oo cel-celis ahaan dhaliyay hal gool 77-kii daqiiqaba.
Waxa uu ka fiican yahay xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Sergio Aguero kaas oo cel-celis ahaan hal gool dhaliyay 78-kii daqiiqaba.
Xiddigaha Premier League
Xiddiga kooxda Man United ee Romelu Lukaku oo qaab ciyaareed fiican ku jira tan iyo markii uu u dhaqaaqay Old Trafford ayaa gool dhaliyay 90-kii daqiiqaba.
Laakiin Alvaro Morata ayaa seegi doona todobaadyoa kadib dhaawac muruqa ah laakiin waxa uu ka cel-celi fiican yahay Lukaku maadaama uu gool dhaliyay 82-kii daqiiqaba.
Jamie Vardy oo ah xiddiga 6-aad ee ugu gool dhalinta fiican dhanka daqiiqadaha ayaa dhaliyay hal gool 122-kii daqiiqaba.
Filed in: Ingiriiska, Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino
Da,yarka Aadka Loo Qiimeeyo Ee Timo Werner Oo Sheegay Kooxaha Uu Jecelyahay In Uu Ku Biiro
Tababaraha Barcelona Ee Ernesto Valverde Oo Haatanba Sii Doortay Shaxdii Uu Kaga Hor Tagi Lahaa Kooxda Chelsea
Taageerayaasha Chelsea Oo U Codeeyay Shaxda Uu Tababare Conte Kaga Hor Tagi Lahaa Barcelona
Barcelona Oo Salaasada Wadahadalo La Furi Doonta Kooxda Chelsea & Xiddiga Ay Ka Doonayso Oo La Ogaaday
Real Madrid Oo Si Lama Filaan Ah Ugu Dhaqaaqaysa Xiddig Weerarka Uga Ciyaara Chelsea, Mana Ahan Hazard
Sir La Helay: Arsene Wenger Oo Shaaca Ka Qaaday In Uu Pep Guardiola Gurigiisa Ugu Yimid & Waliba Wixii Uu Ka Doonayay
Hazard, Bale, Batshuayi, Pulisic, Robben, Pogba, Weigl, De Gea & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga
WARBIXIN: Borussia Dortmund Oo Doonaysa In Ay Si Toos Ah Ula Wareegto Michy Batshuayi Xagaaga & Warkaas Oo Ah Mid U Xun Liverpool Iyo Man United, Maxay Tahay Sababtu
DEG-DEG: Man United Vs Brighton, Leicester City Vs Chelsea & Isku Aadka Wareega 8 Dhamaadka Oo La Soo Saaray
RASMI: Tababaraha Barcelona Ee Ernesto Valverde Oo Soo Saaray Liiska Xiddigaha Uu Kaga Hor Tagayo Chelsea